Fitateram-bahoaka any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Buses. Ny lamasinina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fitateram-bahoaka any Sri Lanka
Fampahalalana ankapobeny momba ny fitateram-bahoaka any Sri Lanka
Any Sri Lanka, somary mivoatra ny fitateram-bahoaka bus. Misy koa ny fiara sy ny bus intercity. Ity no endrika fototry ny fitaterana ifotony eto. Ny ankamaroan'ny fiara fitateram-bahoaka dia miasa toy ny fiara an-tanàn-dehibe ihany koa, satria ampahany amin'ny dian'izy ireo dia mamakivaky ny tanin'ny tanàna.
Ny fitateran'ny fifandraisana an-tariby lehibe indrindra any Sri Lanka dia tuk-tuk. Na izany aza, mandritra izany fotoana izany, ny mpamily tuk-tuk dia mitaky farafahakeliny indroa mihoatra ny saran-dalan'ny mpizahatany tahaka ny avy any an-toerana. Tsara homarihina koa fa ny tuk-tuk dia tsy azo antoka ary tsy mora fitaterana.
Ny taxi mahazatra ho anay eto tsy dia tsara loatra. Azo atao afa-tsy any an-tanàn-dehibe sy eny amin'ny seranam-piaramanidina ihany no ahitany. Eny an-dalana, ny taxi dia tsy mahazatra, tsy maintsy averina amin'ny alalan'ny antso an-tariby. Ny vidin'ny orinasa taxi eto an-toerana dia azo antsoina hoe mora vidy. Izy ireo dia eo amin'ny haavon'ny faritany rosiana.
Ankoatra izany, ny nosy dia manana tambajotra lalamby miroborobo tsara. Ny vidin'ny tapakila dia tena lafo. Na izany aza, raha ny resaka mora dia ny fiaran-dalamby no ambany noho ny fiara fitateram-bahoaka. Na izany aza, azo atao ny mandeha fiaran-dalamby fa tsy amin'ny fananganana, ary ankoatra izany dia matetika feno olona ny fiaran-dalamby.
Karohy amin'ny lamasinina ao Sri Lanka (endrika fikarohana)
Ireo fiara fitaterana any Sri Lanka
Fitateram-bahoaka any Sri Lanka. Ny bus
Sri Lanka dia manana tamba-jotra mandroso tsara amin'ny làlan'ny fiara fitateram-bahoaka - salantsalany ary ao an-tanàna. Ny fiara fitateram-bahoaka no fomba fitaterana lehibe indrindra eto amin'ity firenena ity. Amin'izay fotoana izay ihany, ny ankamaroan'ny fiara fitaterana olona mifampiresaka, dia miaraka amin'ny zotram-piaramanidina, i.e. Afaka mandeha bisy ianao saika na aiza na aiza any Sri Lanka, na dia tsy azo atao aza izany matetika sy tsy misy fanovana. Ny foibem-pivarotana lehibe indrindra ao amin'ny Colombo renivohitra. Raha tsy hainao ny mamantatra mivantana ny toerana mankany amin'ny firenena, dia afaka tonga any Colombo ianao ary avy eo dia misambotra bus izay mandeha amin'izay ilainao.
Bus any Sri Lanka
Rehefa misafidy bisy mitety mpivarotra dia tokony ho tianao kokoa ny bisy misy fiaramanidina amin'ny fotoana rehetra. Fa, mazava ho azy, ny vidin'ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka toy izany dia avo kokoa. Ohatra, avy any Colombo ka hatrany Galle, anaty fiara fitaterana tsy misy vitan'ny mari-piaramanidina, afaka miditra ho an'ny 135 rupees Sri Lankan ($ 0,75) ianao, ary amin'ny fiara fitaterana fiaramanidina 270 rupiah ($ 1,5).
Fiantsonan'ny bisy Colombo
Fiantsonan'ny bisy Colombo. Sri lanka
Avy amin'ny gara fitateram-bahoaka any Colombo, dia afaka mitety amin'ny tanàna na lehibe na lehibe kokoa ianao amin'ity firenena ity amin'ny alàlan'ny bus intercity. Ity gara fitateram-bahoaka ity dia toa trano fanamboarana loko tsy misy loko miloko-mena, eo akaikin'ny fiara maro mena sy volom-borona miloko. Ny toeram-pivarotana fiara dia misy faritra fiandrasana sy trano fidiovana. Betsaka ny mpivarotra foana eto.
Misy làlam-by 200 mahery any Sri Lanka.Mahita ny fandaharam-pitaterana fiara ao amin'ny ntc.gov.lk
Raha tara ianao dia hahita bus toy izao
Ny tena tsy fatiantoka amin'ny fitsangatsanganana bus eto amin'ity firenena ity (amin'ny fiara fitateram-bahoaka mora vidy) dia ny olona maro ao anatiny, isan-karazany ny fofona (tsy mahafinaritra foana), ary koa ny mozika mafy izay tian'ny mpamily.
Fotoana tsy mahafinaritra amin'ny fampiasana fiara fitateram-bahoaka eo an-toerana:
Ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka no tena manenjika be ny fifamoivoizana.
Mba handoavana saran-dàlana, ilaina ny volavolan-dalàna kely, raha tsy izany dia mety tsy hanome fiovana izy ireo.
Tsy nampandrenesina ny banga, ka mila miambina tsara ny tenanao ianao rehefa mitsambikina amin'ny fiara fitaterana.
Tuk Tuki any Sri Lanka
Fandondona mandondona. Fitateram-bahoaka any Sri Lanka
Ity no endrika fototry ny fitaterana an-tanàn-dehibe any Sri Lanka. Vonona kokoa ny mponina eo an-toerana ary mampiasa tuk-tuks kokoa noho ny fiara-bus, satria ambany be ny vidin-jiro ao an-toerana amin'ny tuk-tuks. Na izany aza, ho an'ny vahiny, mampiakatra ny vidiny imbetsaka ny mpamily.
Inona no mandondona
Fandondona mandondona. Sri lanka
Tuk-tuk dia moto 3 anatiny misy kodiarana misy seza mpandeha. Amin'ny maha-fitsipika azy, ny halaviran-dàlana tsy misy dikany no sarona amin'ny fiara toy izany. Ny tuk tuk dia manana mpifaninana, fa ny hafa tsy. Amin'ny tranga farany, ny saran-dàlana dia nifampiraharaha tamin'ny mpamily. Afaka miara-miala aminy ianao, toy ny eny an-tsena. Ny tahan'ny vidin'ny tuk-tuk dia salanisa eo ho eo manaraka: ny kilometatra voalohany dia 50 rupees (0,3 dolara), isaky ny kilometatra manaraka dia 40 rupe (0,25 dolara). Alohan'ny dia dia voalaza fa mandefa karatra fangatahana, ohatra, MAPS.ME, amin'ny findainao mba hahitana avy hatrany ny halavirana sy ny tena vidin'ny dia, satria ny mpamily no te-haka mpizaha tany amin'ny faribolana mba hivezivezy kilometatra fanampiny.
Mazava ho azy fa azo antoka kokoa ny hipetraka amin'ny tuk-tuk miaraka amin'ny mpanohitra iray. Sarotra ihany anefa ny fitadiavana mpamily manaiky hanaitra ny volan'ny vahiny. Matetika izy ireo dia mandainga fa tsy manan-kilema ny metatra, ka manolotra fiara noho ny vidiny.
Fandondona mandondona. bisikiletany
Amin'ny ankapobeny, ny paompy an-kaonty miaraka amin'ny counter iray dia mety ho tsy hita afa-tsy amin'ny tanàna lehibe iray. Raha vonona ny hitondra fiara ianao amin'ny vidin'ny vidiny, dia omen'ilay mpamily ny vidiny farafahakeliny indroa avo roa heny ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny làlana mitovy. Mila miady irery. Raha tsy tarihin'ny vidiny ianao dia afaka manolotra ny vidiny avo roa heny noho ny iray nomen'ilay mpamily, ary avy eo dia tsy hihena ny fitomboany. Raha fantatrao mialoha ny halaviran'ny toerana ilainao ianao, dia azonao atao ny manisa ny vidin'ny dia ny dia mankany amin'ny vidin'ny toerany tsy mihoatra ny 50 rupees isaky ny 1 km. Na izany aza, ho an'ny dia fohy dia fohy, io kajy io dia tsy mety, satria latsaky ny 150 rupee, tsy nisy mpamily tuk-tuk tsy hitondra ilay mpizahatany hatraiza hatraiza. Ilaina ny mandinika ny vidiny mialoha ary mandoa vola ihany rehefa vita ny dia.
Tuk-tuk fionona sy fiarovana
Aza hadino hatrany fa ny tuk-tuk dia tsy fitaterana azo antoka sy mora indrindra indrindra. Ho an'ny fampiononana mahazatra, olona roa dia tsy tokony hipetraka amin'ny tuk-tuk, fa afaka mametaka efatra.
Mandondona mandondona - mitondra mitondra ny toetra! Ity ny Sri Lanka, zazakely! 😉
Ao Sri Lanka dia misy serivisy toy ny manofa kit-tuk mandritra ny andro iray, mba hitety toerana mahaliana. Amin'ity tranga ity dia nodinihina ny vidiny raha jerena ny lalana na rehefa mandeha ny fotoana. Maro ny tuk-tukers no manolotra fitsidihana ireo toerana mahasarika miaraka amin'ny lalany manokana. Saingy maro amin'ireo mpisoloky ao amin'izy ireo, eo ambanin'ny tsidihany mitsidika toerana manan-tantara sy ara-kolotsaina manosika ny mpizahatany ho any amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana, sns. Noho izany, tsara kokoa ny tsy hanaiky ireo tolotra toy izany avy amin'ny tuk-tukers.
Taxi any Sri Lanka
Ny taxi-be mahazatra amin'ny fiara ao Sri Lanka dia tsy mivoatra ary tsy misy amin'ny tanàna lehibe sy eo amin'ny seranam-piaramanidina irery. Zara raha mahita fiara taksiborosy tsy misy famandrihana tsy an-dalana ianao. Raha te handefa fiara avy any amin'ny trano fandraisam-bahiny dia afaka mifandray amin'ny mpiasa ianao, raha mangataka azy ireo hiantso taxi amin'ny fandraisana. Ny tahan'ny fiarakaretsaka ao amin'ity firenena ity dia demokratika ary mifanandrify amin'ny any Rosiana.
Afaka maka taxi iray misy metatra ianao ary amin'ny vidiny voafetra. Ny fitsangatsanganana fohy dia tokony hisafidy metatra ianao, fa raha mandehandeha lavitra, ohatra, mankany amin'ny seranam-piaramanidina, ny vidiny iray mety tsara kokoa.
Tetibola ho an'ny taxi ao Sri Lanka
Vao haingana izay, ny serivisy serivisy taxi-bola vaovao dia nanomboka niasa teto amin'ity firenena ity. Antsoina hoe Taxi Taxi izany. Ahitana fiara mavo na volo fotsy madinidin'ny mpanamboatra indianina Tata (modely Nana sy Indigo), mipetraka hatramin'ny mpandeha 3, nefa tsy misy vatan'ny. Ny tahan'ny vidin'ny Taxi Taxi dia eo ho eo amin'ny 30% ambany noho ny orinasa hafa fiarakaretsaka. Na izany aza, raha manana kitapo lehibe ianao, dia misy risika tsy ahafahanao miditra ao anaty fiara toy izany.
Ireo "mpamily fiarakodia" eo an-toerana dia "manapoaka" ny saran-dàlana. Mety ny baraining miaraka amin-dry zareo, fa ny mpamily kosa tsy manaiky ny mpivarotra. Izany dia mitranga fa tsy mitondra fiara mankany amin'ny hotely ny mpamily fiarakaretsaka iray fa eo afovoan'ny lalana dia mitaky vola be izy handehanana any amin'ny hotely, na tsy manome fiovana na dia amin'ny volavolan-dalàna lehibe indrindra aza. Ny vehivavy ao anaty haizina dia tsy voatery hampiasa taxi (farafaharatsiny, tsy ataon'ny lehilahy).
Air Transport Sri Lanka
Fitaterana an'habakabaka any Sri Lanka amin'ny sidina an-trano
Fanamboarana ny seranam-piaramanidina ao amin'ity firenena ity, saingy tsy mila an'izany firy izany noho ny haben'ny kely any Sri Lanka. Vitsy dia vitsy ny orinasa manao sidina an-trano. Ny ankamaroan'izy ireo dia manao sidina fiaramanidina amin'ny fiaramanidina kely ary eny amin'ny helikoptera aza. Saika tsy misy sidina mahazatra.
Orinasa ao Sri Lanka:
HeliTours - sidina tsy tapaka intelo isan-kerinandro, azo atao ny charter.
FirstAir - sidina Charter.
EasyFly - tabilao.
Ny cinnamon Air koa dia saribao.
Fiaran-dalamby sy lalamby any Sri Lanka
Fitateram-bahoaka any Sri Lanka. Ny lamasinina
Sri Lanka dia tena rakotry ny lalamby. Ny tapakila ho an'ny lamasinina ao an-toerana dia lafo. Ny sampana Colombo - Badulla (izay mandeha eo afovoan-tanàna afovoany (Nuwara Eliya, Kandy, Badulla, Ella) dia ny sampana Colombo - Badulla (izay mandeha eo afovoan-tany afovoany) (Nuwara Eliya, Kandy, Badulla, Ella) ary iray amin'ireo toerana mahasarika indrindra any Sri Lanka.
Fampiononana any Lankanina
Raha resaka fampiononana dia tsy dia tsara noho ny fiara fitateram-bahoaka ny lamasinina. Fa aoka ny hanao ny marina, amin'izao fotoana izao dia miankina amin'ny kilasin'ny ny fiara, ary noho izany ny teti-bolanao. Ny fiara kilasy voalohany, anisan'izany ny fametrahana rivotra, seza hipetrahana malefaka, no tena mionona ary tsy ambany noho ny fiara mifehy ny fiaran-dalamby Eoropeana.
Noho izany, mandeha amin'ny fiaran-dalamby ao Sri Lanka, dia atolotry ny fividianana tapakila avo lenta ihany na amin'ny fiara mpizahatany sy fiaran-dalamby tsy mividy. Tsy dia lehibe ny fahasamihafan'ny vidiny, satria na ny tapakila lafo indrindra aza dia tsy dia lafo, fa ny fahasamihafana amin'ny fampiononana amin'ny sarety samihafa samy hafa.
Ohatra, ny sarety, ohatra, amin'ny kilasy fahatelo, dia avy amin'ny hira hafa tanteraka amin'ny teny :). Matetika be dia be izy ireo, misy mpandeha sasany mihantona eny ambonin'ny sisiloha. Ireo lamasinina ao an-toerana dia azo jerena ho fisintonana fizahan-tany, fa tsy toy ny fomba fitaterana olona fotsiny.
Fiaran-dalamby ao Sri Lanka
Sri Lanka Rail Link
Sarintany amin'ny Railway ao Sri Lanka
Ny fifandraisana amin'ny làlamby any Sri Lanka dia asehon'ny sampana 10, izay miparitaka manerana ny Nosy. Hitanao ny fandaharam-potoana ankehitriny sy ny vidiny amin'ny tompon'andraikitra Tranon-dalamby ao Sri Lanka.
Mividy tapakila fiaran-dalamby
Mampalahelo fa tsy afaka mividy mialoha tapakila amin'ny alàlan'ny Internet amin'ny lamasinina Sri Lankan mahazatra. Na izany aza, misy ny lamasin'ny fizahan-tany sy ny fiara mpizahatany tsirairay. Azonao atao ny mividy tapakila aminy amin'ny alàlan'ny tranokala 12go.asia sy rajadhani.lk
Tantara fohy momba ny lalamby Sri Lanka
Fiaran-dalamby sri lanka
Ny halavan'ny lalamby any Sri Lanka dia 1 450 km fotsiny. Ny fiaran-dalamby voalohany dia natsangana teto amin'ny nosy tamin'ny taona 1864. Ankehitriny ireo lamasinina eto dia efa antitra be (maro ireo naverina tamin'ny taona 1950). Na izany aza, mbola vidina ihany, na dia miadana, mody maoderina. Ohatra, ny lamasinina tamin'ny famoahana taona 2012 mankany Matara sy Badulla. Tsikelikely, ankoatra ny lokomotaly diesel, dia misy fiaramanidina mandeha ho azy. Tonga amin'ny kilasy telo ny fiara mpandeha ao Sri Lanka: 1, 2 ary 3.
300 ny salanisan'ny mpandeha isan'andro amin'ny lalamby any Sri Lankan. Firenena misy fiaran-dalamby sy fiantsonana 000 ary firenena.
Tranonkala Railovy any Sri Lanka railway.gov.lk. Ity vavahady ity dia tena mety: azonao atao ny mametraka ny lalana ilaina, mamaritra ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina, vidiny ankehitriny. Ohatra, ny tapakila iray avy any Colombo mankany Matara mankany fiara iray kilasy 2 dia mitentina 230 rupees Sri Lankan ($ 1,25), ary fiara 3 no mety mitentina 130 rupees (0,7 $); mandalo 3 ora sy 15 minitra ny lamasinina.
Formulir Fikarohana Fikarohana lamasinina any Sri Lanka
Ny endrika eto ambany dia varavarankely fitadiavana fiaran-dalamby any Sri Lanka. Ny angon-drakitra ao amin'ilay olana dia nalaina tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny lalamby any Sri Lanka - www.eservices.railway.gov.lk
Rehefa mitady fiaran-dalamby ianao dia fenoy ireto:
Fiantsonana fanombohana - trano fitobiana (takiana takiana)
Fijanonana - Ny toeram-piasana farany ilainao. (takiana takiana)
Manomboka ny ora - Fotoana fialana maniry (sehatry ny safidy)
Ny Time - Fotoana fahatongavana (sehatry ny safidy)
Daty fikarohana - daty tiana (Ny fiaran-dalamby sasany dia tsy mitsangantsangana isan'andro, fa, ohatra, amin'ny faran'ny herinandro ihany) (sehatry ny safidy)
Ny valin'ny olana dia azonao jerena ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina izay mahaliana anao, ary koa ny vidin'ny tapakila sy ny kilasy misy azo antoka.
mitovy_height_as = "div # votoaty"
Salanisan'ny salanisa 4.9 / 5. Isan'ny isa: 8